Nkọwa:Obere Cover Silicon Key maka Car,Ejiri Mkpuchi Ntucha Maka Car,Chevrolet Cover Cover
Home > Ngwaahịa > Cover Cover Silicone Key Chevrolet > Ihe mkpuchi mkpuchi silicon maka ụgbọala Chevrolet
Anyị Shenzhen Mara mma Earth Technology Co.Ltd na-emepụta Cover Cover Keychaịka ruo afọ asaa. Chevrolet Silicone Key Cover bụ onye nke kasị mma n'ire anyị N'ogbe soft eluigwe na ala isi ikpe n'ihi na akpaaka ruru ya adụ emetụ, scentless, eco-enyi na enyi. Oko mkpuchi Silicone Remote dịkwa nnukwu mkpa ebe ọ bụ na ọ dị elu na mba Europe nke Europe. Anyị nwere obi ike na ị ga-enwe afọ ojuju maka nchebe a dị mkpa maka ụgbọala.
Kwa Igodo nke Silicone Car Key nwere atụmatụ ndị a:
Ejiri 100% siliki
The Silicone Remote Car Case bụ n'ụzọ zuru okè kwesịrị ekwesị n'ihi na gị Chevrolet igodo ụgbọ ala .
Anyị nwere ike ime ihe ọ bụla ọ bụla ị chọrọ.
Anyị nwere uru ego ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu.
Ọdịdị okpomọkụ: -40 centigrade na 230 centigrade.
Ihe mkpuchi mkpuchi silicon maka ụgbọ ala nwere àgwà nke adịghị njọ, gburugburu ebe obibi, mmegide okpomọkụ, ihe siri ike, mmiri na-adịghị ekpuchi, ihe nkwụ.
Ngwa ngwa ụgbọala - isi okwu maka Chevrolet -bụ ọ dịghị nsogbu na environmentally friendly.When ị jide a elu mma mkpuchi isi maka Chevrolet n'aka gị, ọ na-adị nro, dị mma na ìhè. Ị ga-ahụ bọtịnụ 3 onye na-ejide ihe dị n'ime ụgbọ ala mgbe ị nwere ya.
Ihe ndi ozo gbasara Chevrolet isi okwu ugbua , na logo nke ala
Onye ọ bụla ụdị ụgbọ ala isi shells anyị nwere ike inye n'elu 12 na agba maka ị, red, nwa, oké osimiri-acha anụnụ anụnụ, na mbara igwe-acha anụnụ anụnụ, pink, bilie ọbara ọbara, oroma, verdure, apple green, odo, na agba ntụ, kọfị, na-acha ọcha na na
Oke 100% slicon mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala dị oke mma ịkụ
Okpukpo ugwo onu ogugu silk mgbe o na-ere oku na-acha
Epeepe mkpuchi Silicone maka Chevrolet Cruze Kpọtụrụ ugbu a
5 Button Silicone Chevrolet Car Key Case Kpọtụrụ ugbu a
Embossed Logo Chevrolet Car Key Silicone Cover Kpọtụrụ ugbu a
Embossed Logo Chevrolet Car Key Silicone Case Kpọtụrụ ugbu a
Obere mkpuchi Silicone Car Chevrolet Logo Kpọtụrụ ugbu a
Obere Cover Silicon Key maka Car Ejiri Mkpuchi Ntucha Maka Car Chevrolet Cover Cover Cover Cover Silicone Key maka Ford Cover Cover Silicon Maka Car Cover Cover Silicone maka Smart Cover Cover Silicone maka Alfa Car Obere Cover Silicone Key Vw Jetta